Wafdigii Farmaajo u diray shirka Somaliland oo loo diiday visaha dal ku galka Kenya (Xog) - Muqdisho Online
Home Wararka Wafdigii Farmaajo u diray shirka Somaliland oo loo diiday visaha dal ku...
Wafdigii Farmaajo u diray shirka Somaliland oo loo diiday visaha dal ku galka Kenya (Xog)
Sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Kenya, in ay tahay sababta ay Dowladda Soomaaliya u qaadacday shirkii wadahalka Somalia & Somaliland in ay tahay kaddib markii dawlada kenya ay visaha dal ku galka u diiday Waftiga dawlada Faderaalka ee shirka Nairobi laga casuumay.
Shirkan oo ay soo agaasimeen Madaxa Midowga Yurub Alexdar Rhondos iyo La taliyaha MW Farmaajo ee amniga Cabdi Saciid Muuse aya gebi ahaanba aanan laga wargelin safaaradda Somaliya ay ku leedahay dalka Kenya, waxaana shirka wada agaasimayay Wakiilka Somaliland u fadhiya Kenya iyo Madaxa Midowga Yurub.
Alexandar Rhondos oo ku guul dareystay in uu dowladda Kenya ku qanciyo in ay siiyaan visaha dal ku galka wafdiga Soomaaliya aya waxa arinkan ay ku noqoneysa dhabar Ururka Midowga Yurub ee Somalia oo bixiyey dhaqaalaha shirka.
Arinkan ay dawlada kenya sameysay waxaa aad uga caroodey wakiilka Midowga Yurub f Alexander Rondos oo ah ninka mashruuca wada hadalada Somalia iyo somaliland ee wakiilka uga ah ururka Midowga Yurub.
Waxaa wanaagsanaan lahayd in Dr. Nuur diiriye uu shacabka Soomaaliyeed u sheego xaqiiqda dhabta ah ee jirta.
Maanta oo uu dhici laha shirka markii ay dowladda Soomaaliya ogaatay in loo diiday visaha ayuu Agaasimaha Villa Somalia bartiisa twitterka soo dhigay in aanu wafdigiisa ka qeyb galeyn shirka.
Shirkan oo ah mid masiiri ah ayaa waxaa MW Farmaajo uu ka dhigay mid looga hadlaayo masiirkiisa iyo midka Somaliland kaddib markii uu shirka u dirsaday reerkiisa oo kaliya.
Previous articleSomaliland authorities imposes ban on Somali National TV
Next articleYaa ka danbeeyay in Kenya loo doorto ilaalinta xeebaha Soomaaliya?